Roob ka da’ay Hiiraan oo hakiyay gaadiidkii Muqdisho soo aadayay – Radio Muqdisho
Roob ka da’ay Hiiraan oo hakiyay gaadiidkii Muqdisho soo aadayay
Roob ayaa ka da’ay qeybo ka mid ah gobolka Hiiraan ayadoo ay ku diirsadeen dadka degaanka oo jiilaal ku jiray bilihii la soo dhaafay.
Wararka laga helayo magaalada Beledweyne ayaa sheegaya in roobkan oo ka da’ay inta u dhaxeysa Beledweyne iyo Fiidoow uu sababay in ay xiranto waddada isku xirta Muqdisho iyo Beledweyne.
Roobka ayaa biyo dhigay waddo ay gaadiidku mari jireen oo u dhaxeysa Fiidow iyo Beledweyne. Gaadiidka ka tagay magaadada Muqdisho ayaa ku xayiran Fiidoow halka gaadiidkii ka imaan lahaa dhinaca gobollada Dhexe ay ku xayiran yihiin magaalada Beledweyne.
Waddada Laamiga ah ee ay gaadiidkaan mari jireen waxaa xayiray maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Dhinaca kale roobku wuxuu saameyn ku yeeshay dadka barakacayaasha ah ee ku nool degmada Beledweyne sida uu ku soo warramayo wariye Ibraahim Muxumed Geeddi oo ka tirsan Radio Muqdisho.
Wariye Farxaan Suleymaan "Aaad ayay u fiican tahay xaaladdaydu, waana socdaa"